Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany mikasika ny Però » Horohoron-tany mahery M6.1 Misy horohoron-tany any amin'ny faritra manamorona ny sisin-tanin'i Peru-Ecuador
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Ekoatora • Vaovao • Vaovao farany mikasika ny Però • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Any amin'ireny faritra ireny dia nisy ny fihozongozonana tamin'ny tany izay mety hiteraka fahavoazana mavesatra amin'ny tranobe sy fotodrafitrasa hafa.
Tonga tany Sullana ilay horohoron-tany.
Tsapa ny horohorontany tany Però sy Ekoatera
Tsy mbola misy ny tatitra momba ny maty na ny fahasimbana.
Horohoron-tany mahery 6.1 Magnitude namely tany akaikin'i Sullana, Provincia de Sullana, Piura any Peroa.
Ny horohoron-tany dia nianjera tamin'ny halalin'ny tany 10 km ambanin'ny ivon-toerany tany akaikin'i Sullana, Provincia de Sullana, Piura, Peroa, tokony ho tamin'ny mitataovovonana ny zoma 30 Jolay 2021 tamin'ny 12:10 alina teo an-toerana. Horohoron-tany mivaingana no tsapa mafy kokoa noho ny any an-lalina noho izy ireo manakaiky ny tany. Ny halavany, ny ivon-toerany ary ny halalin'ny horohoron-tany dia azo havaozina ao anatin'ny ora vitsivitsy na minitra manaraka rehefa mandinika ny angon-drakitra ny seismologists ary manatsara ny fikajiany.
Tatitra roa navoakan'ny Ivotoerana Fikarohana momba ny Geosciences (GFZ) sy ny Ivon-toerana Eismôma-Mediteraneana (EMSC) no nitanisa ny horohorontany ho 6.1 ny tanjany.
Miorina amin'ny tahirin-kevitra momba ny seismika voalohany, ny horohoron-tany dia tokony ho tsapan'ny olona rehetra ao amin'ny faritry ny ivon-toerany. Any amin'ireny faritra ireny dia nisy ny fihozongozonana tamin'ny tany izay mety hiteraka fahavoazana mavesatra amin'ny tranobe sy fotodrafitrasa hafa.
Fihorohoroana antonony angamba no nitranga tany Sullana (pop. 160,800) miorina 15 km miala ny ivon-toerany, Querecotillo (pop. 25,400) 16 km, Marcavelica (pop. 25,600) 18 km, Tambo Grande (pop. 30,000) 24 km miala, Piura (pop. 325,500) 28 km miala, San Martin (pop. 130,000) 29 km, Catacaos (pop. 57,300) 38 km, ary Chulucanas (pop. 68,800) 47 km.